Shirka Golaha Wasiirrada oo looga hadlay Doorashooyinka, Amniga, Gurmadka Fataadaha iyo Caabuqa Covid-19 – Radio Daljir
Shirka Golaha Wasiirrada oo looga hadlay Doorashooyinka, Amniga, Gurmadka Fataadaha iyo Caabuqa Covid-19
Juunyo 17, 2021 7:55 g 0
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa guddoomiyey kulanka Todobaadlaha ah ee Golaha Wasiirrada oo looga hadlayay Doorashooyinka, Gurmadka Fatahaadaha iyo Xaaladda Caabuqa Covid-19, iyadoo la ansixiyay habraaca shaqo-siinta dibadda ee shaqaalaha xoogsatada Soomaaliyeed.
Ugu horreyn, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa Golaha siiyey warbxin kooban oo ku aadan hirgelinta hannaanka doorashooyinka, waxa uuna sheegay in xubnihii guddiyada ee wax ka badalka lagu soo sameeyay oo ahaa 34 la soo wada dhammeystiray, isagoo xusay in dhawaan la shaacin doono liiska guddiyada doorashooyinka heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalka ay ka dhici doonto doorasho hufan oo daah furan. Iyadoo la ilaalinayo qoondada haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin goleyaasha qaran ee la soo dooranayo.
Sidoo kale, Golaha ayaa warbixin ku saabsan amniga guud ee dalka ka dhageystay Wasaaradaha Amniga iyo Gaashaandhigga, waxayna tilmaameen in howlaha lagu xaqiijinayo amniga ay si wanaagsan soconayaan, iyadoo Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay sii wadaan xoreynta deegannada ay ku dhuumaaleysanayaan argagixisadu, jab xoogganna ay gaarsiiyeen.
Dhanka kale, Wasiirka Wasaaradda Gar-gaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa Golaha u soo bandhigtay xaaladda deegannada ay saameeyeen fatahaaduhu iyadoo xustay dadaallada dowladdu ay hoggaaminayso ee gurmadka loogu fidinayo dadkeenna ay saameeyeen fatahaaduhu.
Ugu danbeyn Golaha ayaa cod aqlabiyad leh ku meel-mariyey Habraac Shaqo siinta dibadda ee Shaqaalaha Xoogsatada Soomaaliyeed oo ay soo diyaarisay, golahana horkeentay Wasaaradda Shaqada & Shaqaalaha.
Madaxweynaha DDS oo socdaal ku maraya degaanado dhowr ah (Sawiro)